Axmed Madoobe iyo Swan oo kulmay | KEYDMEDIA ONLINE
Axmed Madoobe iyo Swan oo kulmay
Madaxweynaha mayalka adag ee dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa la kulmay wakiilka ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya James Swan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa caawa kulan la qaatay wakiilka gaar ka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan.
Kulankan ayaa ka dhacay hoyga uu Madaxweynahu ka dagan yahay Xerada Xalane waxaa looga hadlayay arrimaha doorashooyinka oo muran xoog lihi ka taagan yahay.
Hoggaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa magaalada Muqdisho u yimid sidi xal looga gaari lahaa kala aragti duwanaanshaha arimaha doorashada ka taagan, waxaana uu horay u dalbaday in shirku uu ka dhaco meel ammaan ah, isagoo ula jeeday inuu diiddan yahay in uu ka qeyb galo shir ka dhaca Villa Somalia, waxaana isaga iyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ay sheegeen in ay ubaqanayaan ammaankooda.
Toddobaadkii la soo dhaafay, mas'uuliyiinta maxalliga ah ee gobolka Kassala ee Suudaan ayaa helay in ka badan 40 mayd oo sabaynayey webiga u dhexeeya waddamada. Sida muuqata waxay ahaayeen dad ka cararaya dagaalka ka socda gobolka Tigray.